Allgedo.com » 2011 » June
Home » Archive Montly June, 2011 Munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay 51 guuradii ka soo wareegatay Xornimadii gobolada Koofureed iyo midowgii labada gobol ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho (Daawo sawiro.) Jun 30, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xaflad aad u ballaaran oo lagu maamuusayay 51-sano guuradii ka soo wareegatay xilligii ay xornimada ay qaateen gobolada Koofureed iyo israacii Gobolada Waqooyi iyo Koofur ayaa caawa waxaa lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Qaranka ee Villa Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeybgalay Kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha Baarlamaanka Mudane Shariif Xasan Sh.... Xaflada Xuska 1-da Luulyo Oo si aan horay loo arag looga xusay magaalada Odense ee Dalka Denmark (Masawiro). Jun 30, 2011 Odense, Denmark (AOL) – Xaflada xuska 1-da Luulyo ayaa abid markii ugu horeeysay lagu qabtay magaalda Odense, isla markaana si aan horay loo arag looga xusay 1-da Luulyo 2011, halkaas oo ay isugu soo baxeen dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed ee Odense intoodi uu ku jiray dareenka Wadaninimo.
Xafladan Xuska 1-da Luulyo 2011 ayaa waxaa soo agaasimay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense... Buundada ugu dheer adduunka oo maanta xarigga laga jaray! Yaa dhisay buundadaas, xageyse ku taal? (Arag masawirada buundada.) Jun 30, 2011 Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay June 30, 2011 xarigga laga jaray Buundada adduunka ugu dheer oo la yiraahdo Jiaozhou Bay Bridge taasoo ka bilaabata magaalada Qingdao oo ku taal gobolka Shandong oo ku yaal geesta Bari ee dalka China.
Buundadan cusub oo uu dhererkeedu yahay 42 Kilometers ama 26 Miles ayaa waxay isku xireysaa Dekedda weyn ee Qingdao oo ku taala Bariga China ilaa bariga Jasiiradda... Raysal wasaare Cabdiwali Gaas laba daran mid dooro! Faalo dhab ka hadal ah – By Sadeq Mohamed Ahmed. Jun 30, 2011 Raysal wasaaraha cusub ee Somaliya Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaaz oo dhawaan xilkaas loo magacaabay ayaa waxaa horyaalo in uu kala doorto laba dariiq ama wado midi uu raaci lahaaa taas oo ay adagtay siduu u kala xulan lahaa. Waa wadada horee in uu qaado talaabadii geesinimada laheed ee uu hore u qaaday raysal wasarihii asaga xilka kaga horeeyay mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, taas uu ku muteestay... Two slain as Somali refugees, Kenyan police clash over demolishing a mosque Jun 30, 2011 At least two people were killed and 11 others injured after Kenyan police clashed with Somali refugees over demolishing a mosque and small business stalls in the Dhagahley refugee camp in Dadaab, a home for thousands of refugees from Somalia in northeastern Kenya, witnesses said Thursday.
Kenyan police used tear gas to disperse Somalis protesting against moves by the government to pave the way for... Report: US Drone Targets Militants in Somalia Jun 30, 2011 A Washington newspaper reports that a U.S. drone aircraft fired on two leaders of the al-Qaida-linked militant group al-Shabab in Somalia last week, apparently wounding them.
The Washington Post quotes an unnamed senior military official familiar with the operation.
The official said the strike was carried out amid rising concerns that al-Shabab is working more closely with al-Qaida to strike outside... Shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada Dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah. Jun 30, 2011 Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Abdiweli Mohamed Ali Gaas ayaa golaha u sheegay in xaaladda abaaraha iyo barakacayaasha ay marayaan heerkii ugu sarreeyey loona baahanyahay in wax laga qabto. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu arrimahan kala hadlay hay’adaha Qaramada Midoobey ee u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo barakacayaasha. Ra’iisul Wasaarahu waxuu sheegay in loo baahan yahay in lala... Farmaajo oo loo kireeynayo diyaarad Helikoptar ah xafladda xuska maalinta weyn ee 1-da Luuliyo awgeed. Jun 30, 2011 Waxaa socota qaban qaabada xaflado aad u balaaran oo lagu xusayo maalinta 1-da Luuliyo oo ku beegan jimcaha nagu soo socda, hadaba waxaa si weeyn looga dareemayaa qaban qaabadaas magaala weeynta london, waxaana la diyaariyay labo goobood oo aad u waaweeyn oo ay habaynkaas dadku ku ciidayaan. Waxaa arinta dhadhan usii yeeshay joogitaanka raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo,... Xaalada gobolka Gedo oo saakay kacsan (MAXAY TAHAY SABABTA). Jun 30, 2011 Warar naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa sheegaya in xaalad aan caadi ahayn o kacsanaan ah ay ka jirto degmooyin ka tirsan gobolkaasi, ka gaal markii halkaasi ay gaareen Ciidamo Itoobiyaan ah oo dabaabaad dagaal ku hubaysan.
Warar madax banaan oo kasoo baxaya degmada Balad-xaawo ayaa sheegaya in ay soo gaareen degmada Ciidamo Itoobiyaan ah oo ay wehliyaan ciidamo kale oo Soomaali ah kuwaasoo tababaro... Dagaal beeleed qasaare geystay oo ka dhacay gobolka Mudug. Jun 30, 2011 Deegaan lagu magacaabo Dhegtuur oo ku yaala koofurta gobolka Mudug ayaa waxaa habeenkii xalay ka dhacay dagaal u dhexeeyay labo beelood oo kala dega gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Dagaalkaa ayaa sida warku sheegayo waxa uu yimid kadib labada maleeshiyo beeleed ay isku qabsadeen ceel biyood kaasoo sababay in is afgaranwaagii ka dhashay uu keenay inay labada dhinac hubka isu qaataan.
Dagaalkaa ayaa waxaa... BoggaXiga »